Dhamma Yanant: January 2010
ဘုရားရှင်၏ ဉာဏ်အားတော် (၁၀)ပါး
7:30 AM | Author: Dhamma Yanant
စာရေးသူတို့ ကျောင်းမှာ ညစဉ်ရှိခိုးကြတဲ့ ဘုရားရှင်ရဲ့ ဉာဏ်အားတော်(၁၀)ပါး ဘုရားရှိခိုးပါ။
ဒသဗလဉာဏေန- အားတော်ဆယ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား၏ -
(၁)အကြောင်းဟုတ်သည် မဟုတ်သည်ကို သိမြင်တော်မူသော ဌာနာဌာနကောသလ္လဉာဏ်တော်၊
(၂) ကံ၏အမျိုး ကံ၏အကျိုးကို အမျိုးမျိုးပင် သိမြင်တော်မူသော ကမ္မ၀ိပါကကောသလ္လဉာဏ်တော်၊
(၃) ထိုထိုဂတိ အဂတိသို့ ရောက်ဘိအကြောင်း ကျင့်လမ်းကြောင်းကို ကောင်းစွာထင်ထင် သိမြင်တော်မူသော အနေကဓာတု နာနာဓာတု ဉာဏ်တော်၊
(၄) ဓာတ်အများနှင့် ဓာတ်အများတွင် ထူးခြားအင်ကို သိမြင်တော်မူသော အနေကဓာတု နာနာဓာတုဉာဏ်တော်၊
(၅) သတ္တ၀ါတို့၏ လွန်ကဲစွဲပိုက် စိတ်အကြိုက်ကို စိုက်စိုက်ထင်ထင် သိမြင်တော်မူသော နာနာဝိမုတ္တိကတာဉာဏ်တော်၊
(၆) သတ္တ၀ါတို့၏ ဣနြေ္ဒငါးဆင့် နုအရင့်ကို ထောက်ချင့်ကာလျှင် သိမြင်တော်မူသော ဣန္ဒြိယပရောပရိယတ္တိဉာဏ်တော်၊
(၇) ဈာန်သမာပတ် တရားမြတ်၏ ညစ်ကြောင်း ဖြူကြောင်း ထနိုင်ကြောင်းကို ကောင်းစွာထင်ထင် သိမြင်တော်မူသော ဈာနသံကိလေသာဒိဉာဏ်တော်၊
(၈) ရှေး၌ဖြစ်အင် ခန္ဓာစဉ်ကို သိမြင်တော်မူသော ပုဗ္ဗေနိဝါသာနုဿတိဉာဏ်တော်၊
(၉) စုတေခါနီး သန္ဓေပြီးစ ဟူသမျှနှင့် သေးလှအာရုံ ဝေးအာရုံကို အကုန်သိမြင်တော်မူသော ဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်တော်၊
(၁၀) အရဟတ္တ မဂ်ဉာဏဖြင့် အာသ၀လေးတန် ကုန်ရာအမှန် မြတ်နိဗ္ဗာန်ကို အမှန်သိမြင်တော်မူသော အာသ၀က္ခယဉာဏ်တော်
တည်းဟူသော ဉာဏ်အားတော်ဆယ်ပါးနှင့်၊ သမ္ပန္နံ- ပြည့်စုံတော်မူသော၊ ဗုဒ္ဓံ- မြတ်စွာဘုရားကို၊ အဟံ- ဘုရားတပည့်တော်သည်၊ နမာမိ- ရိုသေမြတ်နိုး လက်စုံမိုး၍ ရှိခိုးပူဇော်ပါ၏ မြတ်စွာဘုရား…။
2:09 PM | Author: Dhamma Yanant
လက္ခီယတေ ဧတေနာတိ လက္ခဏံ။
စကြဝတေးမင်းလက္ခဏာပါတိုင်း စကြဝတေးမင်း ဖြစ်ပါသလား။ (စက်လက္ခဏာနှင့် ပြည့်စုံပေမယ့် ညောင်ရမ်းမင်းသားလေးဟာ စကြဝတေးမင်း မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။) စကြဝတေးမင်းကျင့်ဝတ်ကို ကျင့်မှသာ စကြာရတနာ ဖြစ်ပေါ်ပြီး စကြဝတေးမင်း ဖြစ်ပါတယ်။ (စကြဝတေးမင်း ကျင့်ဝတ်ကို ပါထိကဝဂ် - စက္ကဝတ္တိသုတ် မြန်မာပြန် - ၅၁ ၌ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။) ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်လည်း ဘုရားဖြစ်ကြောင်း ကျင့်စဉ်တို့ကို ကျင့်တော်မူပြီးမှသာ ဘုရားဖြစ်တော်မူပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် လက္ခဏာဆိုတာ အတိတ်ကံရဲ့ အမှတ်အသားမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကံရဲ့ ကောင်းကျိုး ပြည့်စုံဖို့၊ မကောင်းကျိုးများ ပျောက်ပျက်ဖို့ကတော့ ပစ္စုပ္ပန်ကံတွေနဲ့ ဖြည့်တန်ဖြည့်၊ ဖျောက်တန်ဖျောက် ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်ကံ ပြောင်းရင် လက္ခဏာများလည်း ပြောင်းတတ်တဲ့ သဘောရှိတယ်လို့ (လက်ဖ၀ါးပေါ်က) အမှတ်အသားတွေကို ယုံကြည်လွန်းသူများ သတိထားမိစေချင်ပါတယ်။
လက္ခဏာဆိုတာ အကြောင်းတရားမဟုတ်ပါဘူး။ ကံသည်သာလျှင် အကြောင်းတရား ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းကံတရားများကို ဆည်းပူးခဲ့လို့ လက္ခဏာတွေ ပေါ်လာပြီး အဲဒီလက္ခဏာရှိတဲ့သူများ ခံစားရတဲ့ အကျိုးတရားတွေကို ခံစားရတာပါ။ ကောင်းကျိုးလက္ခဏာတွေကို ဗုဒ္ဓရှင်တော်ရဲ့ မဟာလက္ခဏာတော်ကြီးများနဲ့ တွဲစပ်ပြီး သဘောလောက် ဖော်ပြချင်ပါတယ်။
ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့၊ ကျင့်ဝတ်တရားတွေကို ဝတ်မပြတ်ပုံမှန် လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့ (၁) ခြေဖဝါးတော် ညီညာပြီး ရန်သူတွေက မပိတ်ပင် မတားဆီးနိုင်ပါဘူး။
လူအများကို ဘေးကင်းအောင် တရားနှင့်အညီ စောင့်ရှောက်ခြင်း၊ လှူဒါန်းရာမှာ စုံစုံလင်လင် အခြံအရံများနဲ့ လှူဒါန်းခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့လို့ (၂) ခြေဖဝါးအပြင်မှာ စက်လက္ခဏာတော် ဖြစ်ပေါ်ပြီး အခြံအရံ များပါတယ်။
သူ့အသက်သတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပြီး သတ္တဝါတွေကို သနားကာ အစီးအပွား လိုလားစောင့်ရှောက်ခဲ့လို့ (၃) ရှည်သော ဖနောင့်ရှိ။ (၄) ရှည်သော ခြေချောင်း၊ လက်ချောင်းရှိ။ (၅) ဗြဟ္မာမင်းကဲ့သို့ ဖြောင့်မတ်သော ကိုယ်ရှိပြီး သူတစ်ပါးက မသတ်ဖြတ်နိုင်ဘဲ အသက်ရှည်ပါတယ်။
စားကောင်း သောက်ဖွယ်တွေ လှူဒါန်းခဲ့လို့ (၆) လက်ဖမိုး-၂ ခု၊ ခြေဖမိုး-၂ ခု၊ ပခုံး-၂ ခု၊ လည်ကုပ်- ၁ ခု အားဖြင့် အရပ်(၇)ပါး အသားပြည့်ဖြိုးပြီး မွန်မြတ်တဲ့ စားကောင်းသောက်ဖွယ်တွေ ရရှိပါတယ်။
လူအများကို သင်္ဂဟတရားလေးပါးနဲ့ ချီးမြှောက်ခဲ့လို့ (၇) နူးညံ့သော။ (၈) ညီညာသော လက်ခြေရှိပြီး ညီညွတ်သော ပရိသတ် ရှိပါတယ်။
(ကိုယ့်လက်အောက်ငယ်သားတွေ မညီညွတ်ရင်လည်း အလွန်စိတ်ပျက်စရာကောင်း ပါတယ်။ သင်္ဂဟတရားလေးပါးဆိုတာက ပေးသင့်သူကိုပေး၊ ချိုချိုသာသာပြောသင့်သူကို ချိုချိုသာသာပြော၊ အကျိုးဆောင်ပေးသင့်သူကို အကျိုးဆောင်ပေး၊ ကိုယ်နဲ့ထပ်တူထားသင့်သူကို ထပ်တူထားခြင်းတို့ပါပဲ။ ဒါဆို ညီညွတ်သော ပရိသတ်ကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။)
အကျိုးရှိတဲ့စကား၊ တရားစကားတို့ကို ပြောခဲ့၊ တရားအလှူကို လှူခဲ့လို့ (၉) မြင့်သော ဖမျက်ရှိ။ (၁၀) လက်ျာရစ်လည်ကာ အထက်သို့ ကော့တက်နေတဲ့ မွေးညှင်းတော်ရှိပြီး အကြီးဆုံး၊ အမြတ်ဆုံး၊ အချီးမွမ်းအပ်ဆုံးသူ ဖြစ်ရပါတယ်။
အတတ်ပညာတို့ကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ တတ်မြောက်အောင် သေသေချာချာ သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့လို့ (၁၁) ပြေပြစ်သော မြင်းခေါင်းတော်ရှိပြီး ပစ္စည်းပရိက္ခရာနဲ့ ပရိတ်သတ်လေးပါး လျင်မြန်စွာ ရရှိပါတယ်။
ပညာရှိတို့ထံ ချဉ်းကပ်ပြီး သိလိုရာကို အဖန်ဖန် မေးမြန်းခဲ့လို့ (၁၂) အသားအရေ ချောမွေ့ပြီး ပညာဉာဏ် ကြီးပါတယ်။ ပညာအရာမှာ သာသူမပြောနဲ့၊ တူသူတောင် မရှိပါဘူး။
ဒေါသမထွက်ခဲ့၊ ဒေါသကို ထင်ရှားမပြခဲ့၊ ရန်ငြိုးမဖွဲ့ခဲ့ / နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ အဝတ်တန်ဆာတွေကို လှူဒါန်းခဲ့လို့ (၁၃) ရွှေအဆင်း အသားအရေရှိပြီး ထူးကဲလွန်မြတ်တဲ့ အဝတ်သင်္ကန်း၊ အခင်းတို့ကို ရလွယ်ပါတယ်။ ကောင်းမှုတွေလည်းပဲ မပျက်မစီး တည်ရှိပါတယ်။
ကွဲကွာနေသူတွေကို ပေါင်းဆုံစေ/ ညီညွတ်စေခဲ့လို့ (၁၄) အအိမ်ဖြင့် ဖုံးလွှမ်းအပ်သော ပုရိသနိမိတ် ရှိပြီး စကားကို လိုက်နာတဲ့ တပည့်သာဝကများစွာ ရှိပါတယ်။
ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလိုက်၍ ဂုဏ်နဲ့လျော်စွာ ထိုက်ထိုက်တန်တန် ပေးလှူခဲ့လို့ (၁၅) ပညောင်ပင်ကဲ့သို့ ဝန်းသောကိုယ် ရှိကာ (ပုအိုင့်အိုင့်/ ရှည်မျောမျော မဟုတ်ဘဲ လက်နှစ်ဘက်ဘေးကို ဆန့်ထုတ်ထားတဲ့ အကျယ် အတိုင်းအတာနဲ့ လက်ကို အပေါ်ဆန့်ထားရင် ရှိမယ့် အမြင့်အတိုင်းအတာ ညီမျှ)။ (၁၆) မကိုင်း မညွတ် (မကုန်း) ရဘဲ လက်ဝါးပြင်ဖြင့် ပဆစ်ဒူးတို့ကို သုံးသပ်နိုင်ပြီး သဒ္ဓါသီလစတဲ့ သူတော်ဥစ္စာများနဲ့ ပြည့်စုံပါတယ်။ အမြတ်ဆုံး အရဟတ္တမဂ်ဉာဏ်၊ သဗ္ဗညုတဉာဏ် ဆိုတဲ့ ဥစ္စာကို ရရှိပါတယ်။
လူအများရဲ့ အကျိုးစီးပွါးကို လိုလားခဲ့လို့ (၁၇) ခြင်္သေ့မင်းရဲ့ ရှေ့ပိုင်းကိုယ်နဲ့ တူတဲ့ ကိုယ်ရှိ။ (၁၈) လက်ပြင် နှစ်ခုအကြား ပြည့်ဖြိုးတဲ့ အသားရှိ။ (၁၉) ညီညာလုံးဝန်းတဲ့ လည်တိုင်ရှိပြီး သဒ္ဓါသီလ စတာတွေကနေ မဆုတ်ယုတ်၊ သဗ္ဗညုတဉာဏ်မှ မဆုတ်ယုတ်ပါဘူး။
သတ္တဝါတွေကို မညှင်းဆဲခဲ့လို့ (၂၀) အရသာကို ဆောင်နိုင်တဲ့ အလွန်ကောင်းမြတ်တဲ့ အကြောရှိပြီး အနာရောဂါ ကင်းပါတယ်။ ဝမ်းမီးနဲ့ ပြည့်စုံပါတယ်။
ဒေါသနဲ့ မျက်လုံးပြူးပြီး မကြည့်ခဲ့၊ မျက်စောင်း မထိုးခဲ့/ ရိုးဖြောင့်စွာ မေတ္တာဖြင့်သာ ကြည့်ခဲ့လို့ (၂၁) အလွန်ညိုသော မျက်လုံးရှိ။ (၂၂) နွားငယ်ရဲ့ မျက်တောင်နဲ့တူတဲ့ မျက်တောင်ရှိပြီး သတ္တဝါအများရဲ့ နှစ်သက် ကြည်ညိုဖူးမြော်ခြင်းကို ခံရပါတယ်။
ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကို ခေါင်းဆောင်ပြီး ပြုခဲ့လို့ (၂၃) သင်းကျစ်ဆင်ထားသကဲ့သို့သော ဦးခေါင်းရှိပြီး ဗုဒ္ဓအလိုကိုလိုက်တဲ့၊ အဆုံးအမကို လိုက်နာတဲ့ ဝေနေယျ များစွာရှိပါတယ်။
မှန်သောစကားတစ်မျိုးတည်းကိုသာ ပြောခဲ့လို့ ၊ သူများကို မလှည့်စားခဲ့လို့ (၂၄) မွေးညှင်းတစ်တွင်းမှာ မွေးညှင်တစ်ပင်သာရှိ။ (၂၅) မျက်မှောင်နှစ်ခုကြား ဖြူစင်တဲ့ ဥဏ္ဏလုံ မွေးရှင်တော်ရှိပြီး သတ္တဝါအများဟာ ဗုဒ္ဓအလိုကိုသာ လိုက်ရပါတယ်။
ဂုံးမတိုက်ခဲ့၊ ညီညွတ်ခြင်းကို အားပေးခဲ့လို့ (၂၆) လေးဆယ်သော။ (၂၇) မကြဲသောသွားရှိပြီး သူများ မဖြိုခွဲနိုင်တဲ့/ အဆုံးအမကို ခိုင်မြဲစွာ လိုက်နာတဲ့ ပရိသတ် ရှိပါတယ်။
ကြမ်းသောစကားကို မပြောခဲ့၊ နူးညံ့ချိုသာ နားဝင်ချိုအောင် ပြောခဲ့လို့ (၂၈) ကြီးမားရှည်လျား နူးညံ့တဲ့ လျှာတော် ရှိ။ (၂၉) ဗြဟ္မာ့အသံနှင့် တူတဲ့ အသံရှိပြီး ဘုရားရှင်ရဲ့ စကားဟာ အောင်မြင်ပါတယ်။ ဘုရားရှင်ရဲ့ စကားကို နာယူလက်ခံကြပါတယ်။
အကျိုးမရှိ ပြိန်ဖျင်းတဲ့စကားကို မပြောခဲ့၊ အကျိုးရှိတဲ့ စကားကိုသာ ပြောခဲ့လို့ (၃၀) ခြင်္သေ့မေးနဲ့တူသေတဲ့ မေးရှိပြီး အတွင်းအပ ရန်သူတွေ မဖျက်ဆီးနိုင်ပါဘူး။
အသက်မွေးမှုစင်ကြယ်ခဲ့လို့ (စဉ်းလဲ ကောက်ကျစ်၊ ခေါင်းပုံဖြတ် မတရားသဖြင့် ဖြတ်လမ်းက အသက်မမွေးခဲ့လို့) (၃၁) ညီညွတ်တဲ့ သွားတွေရှိ။ (၃၂) အလွန် ဖြူစင်တဲ့ စွယ်တော်လေးဆူရှိပြီး မကောင်းမှု ကိလေသာကင်းတဲ့ စင်ကြယ်တဲ့ အခြံအရံ ရှိပါတယ်။
အကြောင်းအကျိုးများသာ ဆက်စပ်ဖြစ် ပေါ်နေသော သံသရာမှာ မှန်ကန်တဲ့ အကြောင်း အကျိုးကို သိမြင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ်အလိုရှိတဲ့အရာတွေ မရရှိခြင်း (အကျိုးချို့တဲ့နေခြင်း)ဟာ အကြောင်းချို့တဲ့ခဲ့လို့ပါပဲ။ အဲဒါကို ဟိုလူ့ကြောင့် ဒီလူ့ကြောင့်လို့ အပြစ်တင်မနေဘဲ အဲဒီ ချို့တဲ့ခဲ့တဲ့ အကြောင်းတွေကို ပြည့်စုံအောင် ကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်အလိုရှိတဲ့ အကျိုးတွေ ပြည့်စုံလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကျိုးကို မျှော်မျှော် မမျှော်မျှော် အကြောင်းကိုပြုရင် အကျိုးက ရမှာသေချာပါတယ်။ အကျိုးကို မျှော်ခြင်း မမျှော်ခြင်းကတော့ ကိုယ်နဲ့သာ ဆိုင်ပါတယ်။ အခု ရေးခဲ့တာလေးတွေဟာ ကြောင်းကျိုးအမှန်ကို မြင်သိတဲ့ ကမ္မဿကတာ သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်အတွက် ရည်ရွယ်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ အခြေခံဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဉာဏ်ကို အခြေခံ၊ တစ်ဆင့်ထက်တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့ ဉာဏ်တွေရအောင်လုပ်ပြီး အမြင့်ဆုံး နိဗ္ဗာန်ရအောင် ကြိုးစားကြရမှာပါ...။
12:28 PM | Author: Dhamma Yanant
(၁) မြင်ခြင်းဖြင့် ပယ်ခြင်း (ဒဿနာ ပဟာတဗ္ဗာ)
(၂) ပိတ်ခြင်းဖြင့် ပယ်ခြင်း (သံဝရာ ပဟာတဗ္ဗာ)
(၃) မှီဝဲခြင်းဖြင့် ပယ်ခြင်း (ပဋိသေဝနာ ပဟာတဗ္ဗာ)
(၄) သည်းခံခြင်းဖြင့် ပယ်ခြင်း (အဓိဝါသနာ ပဟာတဗ္ဗာ)
(၅) ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့် ပယ်ခြင်း (ပရိဝဇ္ဇနာ ပဟာတဗ္ဗာ)
(၆) ဖျောက်ခြင်းဖြင့် ပယ်ခြင်း (ဝိနောဒနာ ပဟာတဗ္ဗာ)
(၇) ပွါးခြင်းဖြင့် ပယ်ခြင်း (ဘာဝနာ ပဟာတဗ္ဗာ)
(၁) သစ္စာလေးပါးကို မြင်ခြင်းဖြင့် ပယ်ခြင်း
(၁- မွေး၊ အို၊ နာ၊ သေ၊ မချစ်တာနဲ့တွဲ၊ ချစ်တာနဲ့ကွဲ၊ လိုရာမရခြင်း၊ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာရှိနေခြင်း ဟူသော ဒုက္ခတို့ကို သိမြင်ခြင်း၊
၂- တဏှာ လောဘကြောင့် ဒုက္ခဖြစ်နေရသည်ဟု သိမြင်ခြင်း၊
၃- နိဗ္ဗာန်ရောက်မှ ဒုက္ခအားလုံး ချုပ်ငြိမ်းမည်ဟု သိမြင်ခြင်း၊
၄- ထိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ရန် မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးပွားရမည်ဟု သိမြင်ခြင်း)
(၂) မျက်စိ၊ နား၊ နှာ စသော ဣနြေ္ဒတို့ကို ပိတ်ခြင်းဖြင့် ပယ်ခြင်း
(အကုသိုလ်ဖြစ်စရာ အာရုံများကို မကြည့်မိ၊ နားမထောင်မိ မခံစားမိအောင် စောင့်ရှောက်ထိန်းချုပ်ခြင်း)
(၃) ဆွမ်း စသော ပစ္စည်းတို့ကို ဆင်ခြင်၍ မှီဝဲခြင်းဖြင့် ပယ်ခြင်း
(အစား၊ အဝတ်၊ နေရာ၊ ဆေးတို့ကို မိမိအကျိုး၊ အများအကျိုး၊ သာသနာ့အကျိုး ဆောင်နိုင်ရန် သင့်လျော်အောင် သုံးဆောင်ပါသည်ဟု ဆင်ခြင်၍ သုံးဆောင်ခြင်း)
(၄) ဆင်းရဲဝေဒနာတို့ကို သည်းခံခြင်းဖြင့် ပယ်ခြင်း
(မကောင်းသောစကား၊ မကောင်းသောအတွေ့၊ အချမ်းအပူ၊ ခြင်၊ မှက်၊ လေ၊ နေ၊ အနာ၊ ရောဂါစသည်တို့ကို သည်းခံခြင်း)
(၅) နေရာမဟုတ်ရာ၊ ကျက်စားရာမဟုတ်ရာ၊ ယုတ်မာသော မိတ်ဆွေတို့ကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့် ပယ်ခြင်း
(ကိုယ်နှင့်မဆိုင်သော မသွားသင့်သော အရပ်၊ ကြမ်းသော ဆင်၊ မြင်း၊ ခွေး၊ မြွေ၊ သစ်ငုတ်၊ ချောက်ကမ်းပါး၊ အညစ်အကြေးရှိရာအရပ် စသည်တို့ကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်း)
(၆) ကာမဝိတက်၊ ဗျာပါဒဝိတက်၊ ဝိဟိံသဝိတက်ကို ဖျောက်ဖျက်ခြင်းဖြင့် ပယ်ခြင်း
(ကာမဂုဏ်တို့ကို ကြံစည်ခြင်း၊ သူတစ်ပါးကို ပျက်စီးစေရန် ကြံစည်ခြင်း၊ ညှင်းဆဲရန် ကြံစည်ခြင်း ဟူသော မကောင်းသော အကြံတို့ကို ဖျောက်ဖျက်ခြင်း)
(၇) သတိသမ္ဗောဇ္ဈင် စသော ဗောဇ္ဈင် (၇)ပါးတို့ကို ပွားခြင်းဖြင့် ပယ်ခြင်း
(သတိ၊ ပညာ၊ ဝီရိယ၊ ပီတိ၊ ပဿဒ္ဓိ၊ သမာဓိ၊ ဥပေက္ခာ တို့ကို ပွါးများခြင်း)
အနှစ်ချုပ်အားဖြင့် အာရုံများနှင့် ကြုံကြိုက်လာလျှင် မသင့်မလျော် နှလုံးမသွင်းမဆင်ခြင်မိစေဘဲ သင့်လျော်အောင် နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ခြင်း ယောနိသောမနသိကာရ ဖြစ်အောင်ထားခြင်းဖြင့်ပင် အကုသိုလ်တရားတို့ကို ပယ်ပြီး ဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်။
8:47 AM | Author: Dhamma Yanant
ဒါနတော ဘောဂဝါ - “လှူရင် ချမ်းသာမယ်” တဲ့။ လှူလိုက်တယ်။ အကျိုးဆက်ကြောင့် ချမ်းသာတယ်။ ဒါပေမယ့် ချမ်းသာခြင်းနဲ့အတူ ပြည့်စုံမှုအားလုံးကို ဘာကြောင့် ဆွဲမခေါ်နိုင်ခဲ့ရတာလဲ။ လှပခြင်း၊ သြဇာကြီးခြင်း၊ လိုတရခြင်း၊ ရောဂါကင်းပြီး ကောင်းတာတွေကို စိတ်တိုင်းကျ သုံးဆောင်ရခြင်း၊ ရန်သူမျိုးငါးပါး မဖျက်ဆီးနိုင်ခြင်း… ဒါတွေမပြည့်စုံဘဲနဲ့ရော မိမိရဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုက အဓိပ္ပါယ်ရှိမှာလား။ ပိုက်ဆံတစ်ခုတည်းရှိပြီး ဒီအချက်တွေ ကင်းကွာနေရင် ဘယ်လိုလုပ် စိတ်ချမ်းသာနိုင်ပါ့မလဲ။ ကိုယ့်မှာမရှိတာတွေ သူများမှာရှိနေတာကိုမြင်ပြီး (ငွေနဲ့ ၀ယ်မရတဲ့ အရာတွေကို) ၀ယ်ယူဖို့ ကြိုးစားရင်း ဣဿာတွေ ထိန်းမရဖြစ်ပြီးတော့ အပါယ်လေးပါးမှာပါ ခေါင်းမြုပ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ မိမိတို့ ပုထုဇဉ်တွေ မကင်းနိုင်သေးလို့ သံသရာခရီးကို လျှောက်ရတဲ့အခါ ကျော့ကျော့လေး ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ ချမ်းသာပြည့်စုံခြင်းရဲ့ အကြောင်းတရားတွေ ရှာကြည့်ရအောင်…။
(၁) ချမ်းတော့ချမ်းသာပါရဲ့ ရုပ်ကဆိုးနေတာ ဘာကြောင့်ပါလိမ့် ? ။
“သဒ္ဓါတရားနဲ့ မလှူခဲ့လို့ပါ” တဲ့။
သဒ္ဓါယ ဒါနံ ဒေတိ = ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာနဲ့ ကံ၊ ကံရဲ့အကျိုးတွေကို ယုံယုံ ကြည်ကြည် သဒ္ဓါတရားနဲ့ လှူခဲ့မယ်ဆိုရင်... (ယတြာချေသလို လှူတာ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်) ဥစ္စာပေါ ရုပ်ချော ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့။
(၂) ချမ်းတော့ချမ်းသာပါရဲ့ ကိုယ့်သားသမီး တပည့်လက်အောက်ငယ်သားတွေကို ပြောမနိုင်ဆိုမနိုင် ဖြစ်နေရတာ ဘာကြောင့်ပါလိမ့် ? ။
“ရိုရိုသေသေ မလှူခဲ့လို့ပါ” တဲ့။
သက္ကစ္စံ ဒါနံ ဒေတိ = အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ရိုရိုသေသေ လှူခဲ့မယ်ဆိုရင်... ကိုယ်ပြောသမျှ အောင်မြင်ပြီး ဘယ်သူ့အပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ် သြဇာငြောင်းပါသတဲ့။
(၃) ချမ်းတော့ချမ်းသာပါရဲ့ လိုတာမရ ရတာမလို ဖြစ်နေရတာ (ငွေပေးဝယ်လို့မရတာ) ဘာကြောင့်ပါလိမ့် ? ။
“ကာလဒါန မပြုခဲ့လို့ပါ” တဲ့။
ကာလေန ဒါနံ ဒေတိ = လိုတဲ့အချိန်မှာ လိုတဲ့ပစ္စည်းကို လိုသလို လှူခဲ့မယ်ဆိုရင်... ကိုယ်လိုတာကိုလည်း လိုတဲ့အချိန်မှာ လိုသလို ရပါလိမ့်မယ်တဲ့။
(၄) ချမ်းတော့ချမ်းသာပါရဲ့ ကောင်းတာတွေနဲ့ မတဲ့တာ (သွေးတိုးရှိလို့၊ ဆီးချိုရှိလို့ ဟိုဟာမတဲ့၊ ဒီဟာမတဲ့ ဖြစ်ရတာ) ဘာကြောင့်ပါလိမ့် ? ။
“မကောင်းတတ်လို့ဆိုပြီး လှူခဲ့ကြလို့ပါ” တဲ့။
အနုဂ္ဂဟိတ စိတ္တေန ဒါနံ ဒေတိ = အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ ဂုဏ်ကို အာရုံပြုပြီး ချီးမြှောက်လိုသောစိတ်နဲ့၊ မငြိကပ်ဘဲ လှူခဲ့မယ်ဆိုရင်... ကိုယ်စားချင်တာ၊ ကောင်းတာတွေနဲ့ တည့်ပြီး ကောင်းတာတွေ သုံးဆောင်ရပါသတဲ့။
(၅) ချမ်းတော့ချမ်းသာပါရဲ့ ရန်သူမျိုး ငါးပါးရန်က မလွတ်ကင်းတာ ဘာကြောင့်ပါလိမ့် ? ။
“ဂုဏ်တုဂုဏ်ပြိုင်လုပ် လှူခဲ့လို့ပါ” တဲ့။
အတ္တာနဉ္စ၊ ပရဉ္စ အနုပါဟစ္စံ ဒါနံ ဒေတိ = မိမိဂုဏ်ကိုလည်း မဖော်၊ သူတစ်ပါးကိုလည်း မနှိမ့်ချ၊ ဘယ်သူ့ကိုမှ မထိခိုက်ဘဲ မာနကင်းကင်းနဲ့ လှူခဲ့မယ်ဆိုရင်... ရေ, မီး, မင်း, ခိုးသူ, အမွေခံဆိုးတို့ရဲ့ ရန်က ကင်းပါသတဲ့။